OoVimba bokuQikelela-Funda ukuRhweba
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin- I-Bitcoin Falls ibuyela ezantsi kwe- $ 10000 Ukulandela ilahleko ezi-6%, Ngaba iiNkunzi ziya kuLulawula uLawulo?
Ukuhlaziywa: 10 Februwari 2020
• Ukuba iBitcoin iyasilela ukubuyisa inqanaba lamaxabiso le- $ 10000, i-bearish yexesha elincinci inokudlala
• Ukukhanya kweBitcoin kwehla ukuya kwi-9700 yeedola emva kokuphulukana ne-6% ukusuka kwiinyanga ezi-3 eziphakamileyo.
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, sibone iBitcoin ilahleka malunga ne-6% emva kokuvula ngokufutshane malunga ne- $ 10190 namhlanje. Ukuhla kwexabiso elibukhali kukhokelele uninzi lwee-altcoins zokudibanisa ukubona ilahleko enkulu kwezi yure zidlulileyo. Ukusikwa kwe- $ 500 kuyenzile iBitcoin ngoku ukuba ithengise phantsi kwe- $ 10000, nangona i-trajectory ye-bullish isasebenza ngoku.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 10200, $ 10400
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 9800, $ 9200
Emva kokophula i-10000 yeedola izolo, i-Bitcoin iye yaqhubeka yaphawula iinyanga ezi-3 eziphezulu kufutshane ne- $ 10200. Namhlanje, iBitcoin ibone ukuwa okubukhali ukuya kuthi ga kwi-9700 yeedola emva kokudibana nokwaliwa malunga nomda ophezulu wedge, kodwa ixabiso liye labuyela umva kufutshane ne- $ 10000. Okwangoku, le wedge inyukayo ibambe amanyathelo amaxabiso ukusukela ekuqaleni konyaka we-2020.
I-BTCUSD, itshathi yemihla ngemihla-ngoFebruwari 10
Ukuba i-BTC iyaqhubeka nokulungisa ezantsi, ixabiso lingawela kwinkxaso yemali kwi-9800 yeedola. Ikhefu elingezantsi kwale nkxaso linokubangela ukuthengisa okukhulu kwi-9200 yeedola njengoko i-8400 yeedola inokudlala ukuba iBitcoin iyaqhubeka nokuhla. Kwimeko apho abathengi bekwazi ukuphinda babuyise i-10200 yeedola, olona xinzelelo lusondeleyo lokujonga i $ 10400 nangaphaya. Nangona kunjalo, i-Bitcoin ihlala ikwi-intanethi kurhwebo lwangaphakathi.
Ukuhla kwexabiso kutsha nje kuye kwenza ukuba iBitcoin iphantse ichukumise inkxaso ye-wedge ye- $ 9700 kwitshathi yeeyure ezi-4. Kodwa njengoko sinokubona ngoku, iBitcoin ibuyile kancinci emva, yenza ipateni yekhandlela lenkwenkwezi yakusasa. Ukuba iBitcoin ivala ngale patheni yekhandlela, ukunyuka kwexabiso elikhulu kunokukhokelela ekwahlukaneni kwemida ukuya kwi- $ 10400. Nangona, i-10200 yeedola kukuchasana okusondeleyo ukujonga.
I-BTCUSD, itshathi ye-4H-Februwari 10
Ukwehla kwexabiso okuqhubekayo kunokwenzeka ukuba kuthumele uxinzelelo ngakumbi lokuthengisa kwintengiso. Kule meko, i-Bitcoin inokuphinda ityelele inkxaso ye-wedge ye- $ 9700. Ukophuka okuncinci komtshato kunokuqhubeka nokuhla kwexabiso kwindawo yenkxaso eluhlaza okwesibhakabhaka eyi- $ 9500, elandelwa yi- $ 9100. Ukuza kuthi ga ngoku, iinkunzi zeenkomo zisabonakalisa ukuzibophelela kwintengiso.
Thengisa: $ 9968
I-TP: $ 9700
SL: $ 10050
tags uhlalutyo, BTCUSD, Itshathi, Ukubikezela
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin- Iirekhodi zeBitcoin eNtsha ePhakamileyo yoNyanga emva koKwaphula i- $ 9600, ngaba yi- $ 10000 Ithagethi elandelayo?
Ukuhlaziywa: 6 Februwari 2020
• I-Bitcoin isetelwe ukuprinta inyanga nenyanga ephezulu emva kokuphuma komjikelo wokudityaniswa kweveki.
• Emva kwekhefu lakutshanje, iBitcoin ngoku ixhomekeke kwi-9600 yeedola kwirali enkulu elandelayo.
Kwimpawu zethu zangaphambili zokurhweba nge-crypto, sikhankanye intshukumo elandelayo enokubakho yeBitcoin emva kokufumana inkxaso ejikeleze i-9100 yeedola izolo. Ngoku, le nkxaso ibambe inyathelo lamaxabiso njengoko i-Bitcoin idala i-2020 ephezulu ejikeleze i-9700 yeedola. Okubaluleke ngakumbi, i-BTC ngoku ithengisa ngaphezulu kwebhokisi yeentsuku ezisixhenxe kwitshathi yamaxabiso. Kwiiyure ezimbalwa okanye kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, kufuneka silindele ukuba i-Bitcoin ibethe uphawu lwe-10000.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 9800, $ 10000
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 9400, $ 9100
Ngaphezulu kweeyure ezingama-24 zokugqibela, ixabiso leBitcoin linyuke emva kokuhla ukuya kuthi ga kwi-9100 yeedola. I-BTC okwangoku ijolise ekuchaseni kwejelo kwi- $ 9800. Le ndawo yexabiso kulindeleke ukuba ize kwiiyure ezimbalwa ezizayo okanye njalo. Inokude ifike kwi-10000 yeedola ukuba amaxabiso aqhekeza ngaphezulu kwesi sitishi sikhulayo.
I-BTCUSD, itshathi ye-4H-Februwari 6
Kwimeko yokubhabha kwejelo, amaxabiso eBitcoin anokwehla abuyele kumda osezantsi wejelo ngenkxaso enokubakho kwi- $ 9400 kunye ne- $ 9100. Kodwa ujonge isibonisi seMACD, iBitcoin ilungiselela ukunyuka okutsha. Ngokuchasene noko, i-RSI ngoku ivavanya inqanaba lokuthenga okungaphezulu. Ukulandela ikhefu lakutshanje elingaphezulu kwe- $ 9600, nangona kunjalo, i-Bitcoin isetelwe ukuprinta enye ephezulu kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
Izolo, iBitcoin ithengise isezantsi njenge- $ 9100 ngaphambi kokufumana amandla apho ithengisa khona ngoku malunga ne- $ 9638. Oko ixabiso liphumile kwiintsuku ezisixhenxe zokudityaniswa komjikelo, iBitcoin ibuyele kwinqanaba lekhefu kwaye yabuyela umva. Kodwa okwangoku, i-premarket yoyisiwe ngamanyathelo exabiso. Nangona kunjalo, i-BTC ilungiselela i-rally elandelayo eya kwi-9800 yeedola kwaye mhlawumbi i-10000 yeedola.
I-BTCUSD, itshathi yeYure-eyoMdumba 6
Ukujonga izikhombisi zobuchwephesha, iBitcoin ifikelele kowona mmandla uphezulu kwi-RSI nakwi-MACD. Njengoko sibona, ixabiso liphantse ukuba lihle. Ukuba imeko ye-bearish yenzeka, iBitcoin inokufumana inkxaso ejikeleze i-9400 yeedola. Apha ngezantsi kwale nkxaso kukho i $ 9200. Ukuza kuthi ga ngoku, imarike isengazinzanga kwitshathi yeyure. Kuya kufuneka silinde ixesha elithile ukuze sazi ulwalathiso lwentengiso olulandelayo.
UKUTHENGA IMIYALELO YEBITCOIN
Thenga: $ 9617
I-TP: $ 9987
SL: $ 9477
tags uhlalutyo, BTCUSD, Ukubikezela
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin- iBitcoin ihlala iNgacacanga emva kokufikelela kwi- $ 9400, kuya kwenzeka ntoni emva koko?
• Ukulungiswa kwe-bearish kungadlala ukuba umthamo we-BTC uqhubeka ngokuchasene nexabiso lawo.
• I-Bitcoin iyekile emva kokufumana i-1200 yeedola ngeentsuku ezintathu, nangona ukuseta okunyusa amandla kuhlala kusebenza.
Ukufikelela kwi-9400 yeedola izolo, ixabiso likaBitcoin libone iinzuzo ezininzi kwezi veki zidlulileyo emva kokunyuka ngama-40% ukusukela ngoDisemba 2019. Umfutho unqunyanyisiwe malunga ne- $ 9300 nge -0.34% yelahleko kuthengiso lokugqibela lweeyure ezingama-24. Ukuba i-Bitcoin iyasilela ukuqhubela phambili, ixabiso lingadityaniswa okwethutyana. Nangona kunjalo, ukulungiswa okuphantsi kunokupeyinta imeko encinci ye-bearish.
Ixabiso likaBitcoin ngoku linamathele kwindawo ebalulekileyo yokumelana ne- $ 9400 emva kokuphinda ufumane amandla ukusuka kwi- $ 8300 kwimpelaveki ephelileyo. Nangona kunjalo, kukho igumbi lokunyukela phezulu ukuba iBitcoin ilandela olu hlobo lubanzi lwenziwa kwitshathi yeeyure ezi-4. Inqanaba le- $ 9700 kunye ne-10000 yeedola iya kuba kukuthenga okujolise kuko okulandelayo xa i-BTC inyuka ingaphaya kwe- $ 9436- ibhalwe ebomvu kwitshathi.
I-BTCUSD, i-4H Itshathi-nge-30 kaJanuwari
Kule meko, kusenokufuneka siqwalasele umjikelo wokudityaniswa okwangoku obambe amanyathelo ngexabiso phakathi kwamanqanaba eedola ezingama-9200- $ 9436 kwiiyure ezidlulileyo.
Kwimeko yokulungiswa kwe-bearish, i-Bitcoin inokungena kwindawo emhlophe yenkxaso ye- $ 9000 kunye ne- $ 8600. Oko kuyakuza ukuba iBitcoin yehle ngezantsi kwe- $ 9200. Ukuba akunjalo, iBitcoin iya kuhlala ikwimeko yokudibanisa ngaphambi kokuqhubela phambili. Nangona kunjalo, eyona nto ibalulekileyo ekufuneka ihlawulwe kukuba ivolumu ichasene nexabiso. Umthamo we-BTC usezantsi ngelixa ixabiso liphezulu. Oku kuphakamisa ukwahluka kwe-bearish kujikeleze ikona.
Kwitshathi yeyure, umfanekiso mkhulu kakhulu kwaye ucacile. Siyabona ukuba umjikelo omncinci wokudibanisa ufikelela kwindawo eqinileyo yemigca yeorenji yokuhamba. I-Bitcoin kulindeleke ukuba iphume kwiiyure ezimbalwa ezizayo. Okwangoku, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba imeko ye-bullish isathathwa njengefanelekileyo okwangoku.
I-BTCUSD, itshathi yeyure -Januwari 30
Ukuqwalaselwa kokuqhekeka okunokubakho, iBitcoin inokuphinda iqhubeke nokucinga kwangoko xa abathengi begqitha ekuchaseni i-9400 yeedola. Inqanaba eliphambili lokuchasana nokubukela yi- $ 9600 kunye ne- $ 9800. Uvakalelo olubi ngokuqinisekileyo luya kubangela ukwehla okukhulu kwimarike ye-BTC. Nangona kunjalo, kuya kufuneka siqwalasele indawo zenkxaso emhlophe njengenqanaba elilandelayo lokuthengisa- oko kwaphula i-9200 yeedola ukuya kwi-9000 yeedola ngexesha elifutshane.
Thengisa: $ 9337
I-TP: $ 9017
tags BTC, BTCUSD, Ukubikezela, Itshathi yamaxabiso
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin-I-BTC Drops ibuyela kwi- $ 8500, Ngaba le Nkxaso iya kuqhubeka nokuBamba iZenzo?
Ukuhlaziywa: 23 January 2020
• I-Bitcoin ifikelele kwinkxaso ephambili kodwa ilindele umtsalane olandelayo.
• Ixabiso linokubuyisa umva ukuba inqanaba le- $ 8500 libambekile.
Ukusukela kwimiqondiso yethu yangaphambili yokurhweba nge-crypto, ixabiso leBitcoin liye laya kwicala eliphantsi, lichukumisa inkxaso yeedola ezingama-8500 ngexesha lokubhalwa. Le nkxaso ithengise ixabiso ukusukela ukulungiswa kokugqibela. Ukuba i-Bitcoin iyakwazi ukwaphula eli nqanaba lenkxaso, ukulungiswa okunamandla kunokuhlala kwi-8200 yeedola nangaphaya.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 8750, $ 8960, $ 9150
Amanqanaba enkxaso ephambili: $ 8400, $ 8300, $ 8200
Ukujonga kwitshathi yeyure, siyabona ukuba iBitcoin isathengisa ngaphakathi kwejelo. Okwangoku, ixabiso liye lehla laya kumda ongezantsi wejelo. I-BTC izamile ukophula eli jelo kwiyure ephelileyo kodwa iinzame zaliwa. Okwangoku, iibhere ziphinde zazihlanganisa kwakhona.
Itshathi ye-BTCUSD -Iyure nganye-nge-23 kaJanuwari
Ukuba le nyawo ye-bearish ikhokelela ekuphumeni, iBitcoin inokuthi igwetyelwe ilahleko enzima. Inqanaba elilandelayo lenkxaso ekufuneka liqwalaselwe apha yi- $ 8300 kunye ne- $ 8200. Kodwa ukuba ixabiso leBitcoin liyaqhubeka nokuhlonipha eli jelo, kufanelekile ukuba silindele ukubuyela umva kwi- $ 8750 ukufikelela kumda ophezulu wejelo. Ukwahlukana okuphawulekayo kuya kuvuselela iBitcoin kwi $ 8960 kunye ne- $ 9150 yokumelana.
I-Bitcoin ijonge i-bearish kwi-15-imizuzu yexesha. Ixabiso lifakwe kwisitishi sexesha elifutshane elehlayo kuthengiso lokugqibela lweeyure ezingama-24. I-Bitcoin ngoku ifikelele ezantsi kwejelo. Ke sinokulindela ukubuyela umva kumda ongaphezulu wejelo nangawuphi na umzuzu ukusukela ngoku.
Itshathi ye-BTCUSD -15M-nge-23 kaJanuwari
Ukuba sibona ukwehla ngaphantsi kwejelo elihlayo, ixabiso le-BTC linokuqhubeka nokujonga inkxaso kwi-8400 yeedola nakwi- $ 8300. Okwangoku, inqanaba lokubuyisela ekubambeni kwinqanaba lokujonga i-8600 yeedola. Ukuba ukuxhathisa kuyaqhekeka, iBitcoin inokuphinda iqhubeke ngokunyuka iye kumgca otyheli wama- $ 8664 kunye ne- $ 8776 yokumelana. Ukuza kuthi ga ngoku, i-BTC isathatha isigqibo kumaza alandelayo.
Thenga: $ 8507
I-TP: $ 8600
SL: $ 8450
tags uhlalutyo, BTC, I-CTCUSD, Ukubikezela
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin- I-Bitcoin ilungisa iipesenti ezi-3% ukuya kwi-8800 yeeRandi kodwa iiBhere zisazibophelela
Ukuhlaziywa: 22 January 2020
• I-Bitcoin iphinda ibuyise amandla kwakhona kwi-8800 yokuxhathisa.
• Idijithali yemali ekhokelayo iyaqhubeka nokuxhomekeka kwinkxaso- $ 8500
Emva kokurhweba nge- $ 8600 kwiintsuku ezimbalwa, izolo, ixabiso leBitcoin lenyuke nge-3% ukufikelela kwinqanaba le- $ 8800. Eli nqanaba ngoku licinezela uxinzelelo lwe-bullish. Ukuba ikhefu lenzeka, kuya kufuneka sibone enye inzuzo. Ngexesha lokubhalwa, ulawulo lwe-BTC yi-57.8%. Sinokulindela ukulungiswa emva kokuba ulawulo lweBitcoin luqhubeke luyehla.
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 8600, $ 8500
Ukuguquguquka kweBitcoin bekukruqula okoko ixabiso lehle ukusuka kwi- $ 9150 kwimpelaveki edlulileyo. Izolo, iBitcoin ibonise amandla amancinci achukumisa i-8800 yeedola. Ukusukela ngoko, urhwebo luhleli luzolile malunga ne- $ 8700. Imakethi ye-BTC isephakathi kokudityaniswa okwangoku.
Itshathi ye-BTCUSD-4H-nge-22 kaJanuwari
Njengoko sibona, ukuqhekeka komtshato kuye kwaqhubeka ukugcina abathengisi bexakekile. Nangona kunjalo, ukuba amaxabiso eBitcoin anyuka ngaphezulu kwe- $ 8800, inqanaba elilandelayo lokuchasana nokubukela yi- $ 9000 kunye ne- $ 9150. Kwaye ukuba ixabiso libuyela umva, i-8600 yeedola kunye ne-8500 yeedola iya kuba yinkxaso yeBitcoin.
Kwitshathi yeyure, i-Bitcoin iphantsi komda weshaneli. Imeko esecaleni iqhubekile nokudlala njengoko i-BTC izabalazela ukwahlukana ne-8500- $ 8800 yemimandla yamaxabiso ukusukela ngoJanuwari 19. Nangona kunjalo, i-BTC izame ukwahlukana ngaphezulu kweeyure ezingama-24 zokurhweba kodwa yahluleka kwinkcaso yokumelana nejelo. Ngoku, ixabiso likaBitcoin libonisa ubuthathaka kwinkxaso yejelo.
Itshathi ye-BTCUSD -Iyure nganye-nge-22 kaJanuwari
Ukuba abathengisi babuyele emarikeni, sinokubona ukubuyela umva kwi- $ 8500. Okwangoku, ukunyuka okunyanzelekileyo kungathumela ixabiso emva kokuxhathisa kwejelo kwi- $ 8750. Ukunyuka okuthe kratya kunokuqhubela phambili ukuthenga kwi-9000 yeedola nangaphezulu. Nangona kunjalo, ee kufuneka igcine iso kwi-8300 yeedola ukuba ijelo liyaphuka. Ngelixa ulinde ikhefu lamaxabiso, i-Bitcoin okwangoku ithathwa njengengathathi cala ngalo mzuzu.
Thengisa: $ 8664
tags uhlalutyo, Ukubikezela, Itshathi yamaxabiso
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin-i-BTC idibanisa emva kokulungisa ilahleko: phi ngokulandelayo?
Ukuhlaziywa: 21 January 2020
• Ngaphandle kokungazithembi, i-Bitcoin inokulungisa ngakumbi ukulungiswa kwe-bearish.
• I-Bitcoin ngoku ibambe ukunganyangeki kwi-8800 yeedola ngaphezulu kweeyure ezingama-48 zokuthengisa.
Ukusukela ukuba i-Bitcoin yehle isuka kwi-9150 yeedola kwimpelaveki, ixabiso liqhubekile nokujikeleza iidola ezingama-8600. Ngenxa yeendlela ezijikayo kwitshathi yemizuzu engama-30, i-BTC iye yahamba ngobunono ngaphandle komda owakha itshathi yeeyure ezi-2. Nangona kunjalo, imeko inokuba mbi ukuba iBitcoin yehla ngezantsi kwenkxaso yokubamba ngoku.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 8800, $ 9000
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 8450, $ 8000
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi ye-2H-Bearish
Kwitshathi yeeyure ezi-2, i-Bitcoin ishiye kancinci ipatheni yomtshato kulandela ukudityaniswa okumangalisayo kwezi ntsuku zimbini zidlulileyo. Okwangoku, ukungaziphathi kakuhle kwe-BTC kuthotyelwe ngezenzo zexabiso elingenaxabiso. Kwimeko apho sibona olunye uqhushululu lwe-bearish, imakethi inokuphinda ihlole inkxaso ye- $ 8450. Inokude ifike kwi- $ 8000 ukuba ukunyuka kuya kuba nzima.
I-BTCUSD, i-2H Itshathi-nge-21 kaJanuwari
Kodwa njengoko kubonakala ngoku, ixabiso likaBitcoin lisekhona. Kwelinye icala, abathengi banokubuyela umva kwintengiso baphinde basete. Ukuba banokuphinda bahlanganisane ngaphezulu kwe-8800 yokuxhathisa, kunokuba lula ukubuyisa ukumelana ne- $ 9000. Kwimeko yentengiso yangoku, akukho mqondiso wenzala phakathi kwabarhwebi okwethutyana. Urhwebo lwexesha elizayo luza kuxela ukuba yeyiphi indlela elandelayo yeBitcoin.
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin (BTC): Itshathi ye-30M-engathath'icala
Kwisithuba semizuzu engama-30, siyabona ukuba iBitcoin ilandela imeko esecaleni. Eyona nto ibaluleke kakhulu, inyathelo lamaxabiso lifakwa kumda wesiteshi-sisebenza njengenkxaso kunye nokumelana kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo. Kwakhona, imarike ihlonipha umgca ophuzi ophuzi owenziwe ukusuka ngoJanuwari 19 phezulu.
I-BTCUSD, i-30M Itshathi-nge-21 kaJanuwari
I-Bitcoin ibanjiwe kodwa sinokulindela intshukumo enkulu emva kokuphuma kwexabiso lomda wesiteshi. Ikhefu elingaphezulu kwejelo lingasibuyisela kwi- $ 8900 kunye ne- $ 9100 yokumelana. Ikhefu elingezantsi kwejelo lingakhokelela kwi-Bitcoin ngqo kwi- $ 8500 ngaphambi kokuqhubela phambili kwi-8200 yeedola.
Okwangoku, ixabiso leBitcoin lilingana. Kuya kufuneka silinde ikhefu elicacileyo ngaphambi kokuba singene.
tags uhlalutyo, BTC, BTCUSD, Ukubikezela, Ingcinga yokurhweba
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin- iBitcoin ibonisa ukungabikho kworhwebo ngenxa yoLungiso lwaMva nje
Ukuhlaziywa: 20 January 2020
Ulungiso lwamva nje lurhoxisa uvakalelo lwexesha elide.
• I-Bitcoin ihlala ingenasigqibo emva kokulungisa ilahleko kwi- $ 8500.
• Ikhefu lesitishi lijika i-BTC bearish kwitshathi yeyure.
Izolo, ixabiso leBitcoin libone ukulungiswa ngesiquphe ukusuka kwi- $ 9150 ukuya kwi- $ 8450 emva kokubona iiveki ezine zokukhula. Nangona kunjalo, ixabiso liye lahlawula i-8650 yeedola- apho i-BTC ixabiso layo ngoku. Ukuba iinkunzi zeenkomo azikwazi ukudibanisa kakuhle, ixabiso leBitcoin linokudlulela kwi- $ 8000 kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 8800, $ 9150
Kwezi veki zidlulileyo, iBitcoin ibone izibonelelo ezininzi zokufikelela kumanqaku angama- $ 9150 izolo. Emva koko, ixabiso lilungisa ngokukhawuleza laya kwi-8450 yeedola kodwa ngoku libone ukubuyiswa okuncinci ukuya kwi-8650 yeedola. Okwangoku, le pateni yentsingiselo yenziwa ngaphakathi komtshato. Ukusukela oko kwehla, ixabiso likaBitcoin lihleli kwinkxaso yemali. I-BTC inokubuyela umva ukuya kuma- $ 8800 kunye ne- $ 9150 yokuxhathisa ukuba abathengi baphinde bahlangana kakuhle.
I-BTCUSD, i-4H itshathi yexabiso-nge-20 kaJanuwari
Nangona kunjalo, i-wave ye-bullish esembindini isasebenza kodwa iBitcoin eneneni ayinazigqibo ngalo mzuzu. Ukuba imakethi ye-BTC iwa ngokucacileyo kumda wedge, ixabiso linokuphinda libuyisele inkxaso kwi-8450 yeedola. Ikhefu phantsi kwale nkxaso linokonyusa uxinzelelo lokuthengisa kwi- $ 8000. Kodwa okwangoku, akukho mqondiso wentengiso kwintengiso.
Ukwehla kwexabiso kutshanje kubangele iintlungu ezibukhali phakathi kwabarhwebi be-BTC, bezisa ixabiso phantsi kweentsuku ezintandathu ezikhulayo. Njengoko sibona, imarike ngoku ithotyelwe ngezenzo zexabiso elingenaxabiso. Okwangoku, iBitcoin iphawulwe ngenkxaso ye- $ 8450. Ikhefu lesitayile likhokelele abathengisi ukuba babuyele emarikeni.
I-BTCUSD, itshathi yamaxabiso ngeyure -Januwari 20
Ukuba iBitcoin inokufumana inkxaso kwi-8450 yeedola, ixabiso linokuphinda libuyele umda wesitishi esezantsi kwi-8800 yokuxhathisa ngaphambi kokuthengisa. Ukunyuka ngaphezulu kolu xhathiso kunokuvumela ukufikelela kwi-9000 yeedola. Kodwa ukuba imarike ibuyela kwinkxaso yangoku kwaye idilike, iBitcoin yayiwela kwi-8200 yeedola yenkxaso- apho umgca otyheli ulayini ulele khona. Nokuba yeyiphi na indlela, i-BTC okwangoku i-bearish kwitshathi yeyure.
Thengisa ungeniso: $ 8650
SL: $ 8854
tags BTCUSD, Ukubikezela, Uhlalutyo lomsebenzi
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin-amaxabiso ala ukuya kwi-8600 yeedola, ngaba i-Bitcoin ingayenza okanye iyaphule le nkxaso?
Ukuhlaziywa: 16 January 2020
• Ixabiso leBitcoin linqunyulwe laya kuthi ga kwi-8600 yeedola emva kokwaliwa kwi-8800 yeedola.
• Ipateni ekwi-bullish ihlala isebenza kodwa inokuphela ukuba iBitcoin iphule isinqumka kwitshathi yeeyure ezi-4.
Emva kokophula i-8400 yeedola kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, iBitcoin ijongane nokwaliwa okunzulu malunga nokumelana ne- $ 8800. Ngenxa yoku, ixabiso le-BTC lehle kwi-8600 yeedola inkxaso kwangoko namhlanje. Ukuba i-Bitcoin iyaqhubeka nokulungisa, sinokubona ukuthengisa kwi-8000 yeedola nangaphezulu ngaphambi kokufumana amandla kwakhona. Nangona kunjalo, ikhefu elingaphezulu kwe- $ 8800 liza kuqinisekisa ukuseta okungakumbi.
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 8700, $ 8850
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 8400, $ 8000
Kwiiyure ezi-4, ixabiso likaBitcoin lehle laya kwi-8600 yeedola emva kokubona ukungafunwa okuninzi malunga nokumelana ne-wedge eyi- $ 8800. Ixabiso linokutyibilika kwinkxaso ye-wedge ye- $ 8400 kwixabiso elilandelayo lokuhla. Nangona kunjalo, i-BTC ihlala iphantsi kolawulo lwe-bullish. Ke, kusekho ithemba lesaphulelo njengoko ixabiso linokuphinda liqwalasele i-8700 yeedola kunye ne-8850 yamanqanaba oxhathiso.
I-BTCUSD, i-4H Itshathi-nge-16 kaJanuwari
Ekuphela kwento onokukhathazeka ngayo apha kukwaphuka komtshato. Ukuba oku kuyenzeka, kunokuba sisiphelo sexesha elifutshane lokunyusa njengoko iibhere ziya kubuyela emarikeni. Amanqanaba amaxabiso okonakala okunokubakho yi- $ 7770 kunye ne- $ 7364. Nangona kunjalo, i $ 8000 ibalulekile inkxaso. Ukuba abathengi babuyisa i-8850 yeedola, i-Bitcoin iya kuqhubeka nokunyanzeliswa.
Ngexesha lokubhalwa, i-Bitcoin ithengisa ezantsi kwejelo elenzileyo ukusukela izolo. Ngelixa uhleli kule nkxaso iphambili ye- $ 8600, zimbini izinto ezinokwenzeka: ukwenza okanye ukwaphula. Ukuba iBitcoin yenza ngenkxaso yeli jelo, ixabiso linokubuyela umva kuxhathiso lwama- $ 8800 ukuhlangabezana nomda wejelo eliphezulu.
I-BTCUSD, i-30M Itshathi-nge-16 kaJanuwari
Kwelinye icala, ukonakala kunokubakho kumaxabiso asezantsi kwinkxaso ye- $ 8400, kuvavanywa umgca wokunyuka komhlophe. Ngaphandle komda wesezantsi wejelo, iBitcoin ikwaxhaswa ngumgca wempunga ongwevu owasekwa ukusukela nge-14 kaJanuwari. Nangona kunjalo, ukuba i-BTC inyuka ngaphezulu kwesakhelo setshaneli, sinokulindela ukuseta okungaphaya kokuqhubela phambili. Ukuza kuthi ga ngoku, i-Bitcoin ihamba ecaleni kwitshathi yemizuzu engama-30.
Thengisa ungeniso: $ 8615
I-TP: $ 8400
SL: $ 8712
tags BTC, BTCUSD, Ukubikezela, Ixabiso leNtshukumo
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin- Amehlo eBitcoin $ 7600 Kodwa i-8000 yeedola ibambe iqinile
• I-Bitcoin iphakathi kwesangqa sokudibanisa.
• Abathengisi banokufumana ulawulo ukuba ukonakala kwe- $ 8000.
NgoJanuwari 8, ixabiso likaBitcoin libetha i-8400 yeedola emva kokurekhoda ukunyuka kwexabiso leentsuku ezintandathu. Intengiso yabona ukwehla okuncinci ukuya kwi-7800 yeedola ngaphambi kokubuyela umva apho iBTC ngoku inexabiso kwi-8000 yeedola. Nangona kunjalo, yonke intengiso yentengiso inyuke yabuyela ngaphezulu kwe-200 yezigidigidi zeedola nge-BTC yolawulo lwe-68.1%. Singalindela ukukhula okubonakalayo ngokukhawuleza njengoko ibango lonyuka. Ngaphandle koko, iBitcoin inokubuya kwakhona!
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 8800, $ 9600
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 7800, $ 7400
Ukusukela ukuba ixabiso likaBitcoin lehlile kwinkcaso ye-8400 yeedola, intengiso ihleli embindini wokudityaniswa. Oku kuphakamisa ukuba i-BTC ithatha isigqibo kwi-rally enkulu elandelayo. Kwicala elisezantsi, intengiso ixhaswe yi- $ 7800- unxantathu owophulwe kwintlanganiso yeveki ephelileyo.
I-BTCUSD, itshathi yemihla ngemihla-nge-13 kaJanuwari
Ukuthengisa ngezantsi kwenkxaso kunokukhokelela kuthengiso olunzulu njengoko inkxaso yeedola ezingama-7400 inokuphononongwa. Kwicala elingaphezulu, i-Bitcoin ijongene nokuxhathisa kwe- $ 8400. Ukuba oku kuchasana kuyaphuka, iBitcoin kulindeleke ukuba inyuke iye kufikelela kwi-8800 yeedola nakwi-9600 yeedola. Nangona kunjalo, i-crossover yakutshanje kwizalathi zobugcisa bemihla ngemihla ityhila ukuba imakethi ye-BTC okwangoku iqhubekile.
Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo ngoku, ixabiso likaBitcoin belizinzile ngokujikeleza amaxabiso eedola ezingama-8000 emva kokwaliwa okwaphula kancinci ngaphezulu kwepateni yesitayile esinyukayo kwitshathi yeeyure ezi-4. Ukuza kuthi ga ngoku, i-MACD yezobuchwephesha kunye ne-RSI zijolise ekuweni kodwa zibambe inkxaso kwinqanaba labo eliphakathi. Sinokufumana ukwehla okunzima ukuba i-BTC yehla ngaphantsi kwenqanaba lezikhombisi ezichaziweyo.
I-BTCUSD, i-4H Itshathi-nge-13 kaJanuwari
Inkxaso yeBitcoin kusenokwenzeka ukuba ijonge ngaphandle yi- $ 7600 yokuhlangabezana nenkxaso yejelo. Ukusuka apha, kuya kufuneka silindele ukuba imakethi ibuye ibuye ibuye kwi- $ 8400 kunye ne-8800 yokuxhathisa. Ukuba i-Bitcoin iqhuba ngaphantsi kwesi sitishi, ixabiso lingabuyela kwi- $ 6900 ngaphandle kwexesha. Njengoko ime ngoku, abathengi basabonisa ukuzibophelela kwintengiso.
Thengisa ungeniso: $ 8088
I-TP: $ 7666
SL: $ 8300
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin-Ixabiso lamaDrophu njengoko iBitcoin ijongeka kwinqanaba lokuQiniseka kwakhona
Ukuhlaziywa: 10 January 2020
• Ikhefu elingaphezulu kwendlela yemihla ngemihla yejelo iya kuqinisekisa imeko ekhulayo.
• I-Bitcoin inenkxaso ephambili kwi-7400 yeedola.
• Abathengisi bexesha elifutshane baphinde bafumane ulawulo lweemarike emva kwekhefu le- $ 8000.
I-Bitcoin iqhubekile nokuhlala ibambekile kwindawo ye-bearish, kulandela i-8 kaJanuwari ukwaliwa kwisitishi esihlayo esenza kwitshathi yemihla ngemihla. Imeko ye-bearish inokuba mbi ukuba amaxabiso ayaqhubeka ukwehla ngezantsi kwendawo yenkxaso kwangoko kwitshathi yeeyure ezi-4. Ngexesha lokubhalwa, amaxabiso eBitcoin ahlala ebuthathaka!
Amanqanaba aphambili okumelana: $ 8000, $ 8400
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 7600, $ 7400
NgoJanuwari 8, ixabiso leBitcoin lehla emva kokufikelela kwi-8400 yeedola nge-rally yeentsuku ezintandathu ezilungileyo. Ukuwa kukhokelele kwintengiso apho i-BTC okwangoku inexabiso kwi $ 7700. Uxinzelelo lokuthengisa lubonakala kakhulu ekubuyiseleni emva kwekhefu le-6 kaJanuwari ukusuka kwisitayile esihla esingwevu kwitshathi yemihla ngemihla. I-Bitcoin inokuphinda ibuye umva ukuba intengiso ifumana inkxaso kule patheni yendlela.
I-BTCUSD, itshathi yemihla ngemihla-nge-10 kaJanuwari
Ukuchasana okuphambili apha yi- $ 8000. Ukunyuka ngaphezulu kwale nkxaso kuya kubonelela ngokuchasene ne- $ 8400 kwakhona. Ukuba amaxabiso abuyela umva kwisitishi esingwevu, iBitcoin iya kujonga ngakumbi kwinkxaso kulayini obomvu okhulayo, ukusuka apho kunokwenzeka khona ukubuyela. Ukuhla okuqhubekayo ngezantsi kwala manqanaba akhankanyiweyo kungabuyisa i-BTC ukuya kwi-7000 yeedola kwaye mhlawumbi i-65000 yeedola. Nangona kunjalo, eyona nkxaso ikufutshane ngoku yi- $ 7600.
Izolo, besikhankanyile umgca otyheli obalulekileyo, osebenza njengomgca wenkxaso ediagonal kwitshathi yeeyure ezi-4. IBitcoin yaphule ukuhlangabezana nendawo yenkxaso ethe tye ye- $ 7650- apho ixabiso linokubuyela umva. Ukuba i-7650 yeedola isilela ukubonelela ngesaphulelo, iBitcoin inokufudusa i-7400 yeedola.
I-BTCUSD, i-4H Itshathi-nge-10 kaJanuwari
Ukuba i-BTC ifumana inkxaso kwaye ibuye ibuye kwezi ndawo zikhankanyiweyo, sinokulindela ukuba abathengi baphinde bavuselele uxinzelelo kwintengiso. Ngelo xesha, ukuxhathisa kwe- $ 8000 kunye ne- $ 8400 iya kuba yinto ekujolise kuyo elandelayo. Ukuza kuthi ga ngoku, iBitcoin isakhangela amanqanaba asezantsi njengoko abathengisi banokuhlala ithutyana ngaphambi kokuba abathengi babuye kwimarike.
Thengisa ungeniso: $ 7750
SL: $ 7900
tags BTC, BTCUSD, Itshathi, Ukubikezela, Uhlalutyo lomsebenzi